ဇီးကုန်းမြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဇီးကုန်း မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ကိုဩဒိနိတ်: 18°20′18″N 95°37′23″E﻿ / ﻿18.338461°N 95.623039°E﻿ / 18.338461; 95.623039ကိုဩဒိနိတ်: 18°20′18″N 95°37′23″E﻿ / ﻿18.338461°N 95.623039°E﻿ / 18.338461; 95.623039
ဇီးကုန်းမြို့ သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ ဇီးကုန်းမြို့နယ်၏ ရုံးစိုက်မြို့ ဖြစ်သည်။ ဇီးကုန်းမြို့သည် ရန်ကုန် ပြည် မီးရထားလမ်းပေါ်၌ တည်ရှိ၍၊ ရန်ကုန်မြို့မှ ၁၁၆ မိုင်၊ ပြည်မြို့မှ ၄၅ မိုင်ကွာဝေးသည်။ ဇီးကုန်းမြို့၌ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးကို မြူနီစီပယ်ဖွဲ့၍ အုပ်ချုပ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြို့ပေါ်လူဦးရေမှာ ၁၅,၂၃၃ ယောက် ဖြစ်သည်။
ဇီးကုန်မြို့နယ်မှာ ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးသောနယ်ဖြစ်၍ ဆန်စပါးလုပ်ငန်းသည် အဓိကဖြစ်သည်။
ဇီးကုန်းကို ခရစ်နှစ် ၁၃၁၂ တွင် တည်သည်ဟု အဆိုရှိသည်။ သာယာဝတီမြို့ (အခု ကြို့ပင်ကောက် အရှေ့ မြို့တွင်းရွာ)ကို တည်သော သတိုးနော်ရထာသည် မြို့တော် အနောက်ဘက်သို့ လှည့်လည်စဉ် ဇီးပင်ကလေးများ တန်းပေါက်နေသည့် ချောက်ကမ်းပါး၌ စခန်းချကာ ရွာတည်ရာ ဇီးကုန်းဟု တွင်သည်။ ရွာမြေနှင့် တကွ မြသိန်းတန်စေတီကို တည်သည်။ ဇီးကုန်း၏ မူလ တည်နေရာမှာ ယခု ရွာမ ရပ်ကွက် တည်ရှိရာ မီးရထားလမ်း၏ အရှေ့ဘက် ဖြစ်သည်။ ၁၈၇၇ တွင် ရန်ကုန်-ပြည် မီးရထားလမ်း ဖွင့်သောအခါ ဇီးကုန်းတွင် ဘူတာရုံ တရုံ ထားရှိသည်။ ၇ မတ် ၁၈၇၈ ရက်စွဲပါ အခွန်တော် မြေစာရင်း မင်းကြီးရုံး စာအမှတ် ၂၅ အရ ဇီးကုန်းကို မြို့အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ဇီးကုန်းမြို့တွင် ၁၉၅၃ ၌ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေ ၇၆၅၂ ဦး နေထိုင်သည်။ 
ဇီးကုန်းမြို့ မြသိန်းတန်ဘုရားသည် မြို့ကျက်သရေဆောင် စေတီတော် ဖြစ်ပြီး ခရစ်နှစ် ၁၃၁၂ ခုတွင် သုံးမြို့ရှင် သတိုးနော်ရထာက တည်ထား ကိုးကွယ်သည်။ အဖိုးတသိန်း ထိုက်သော မြဆင်းတုတော်ကို ဌာပနာ ပြုသဖြင့် မြသိန်းတန်ဘုရားဟု တွင်သည်။
အမျိုးသား ဦးလှဒင် (သစ်နဖားကျေးရွာ)
သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် သန်းတင်
ဂျပ်ဆင်ကောလိပ် ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာလှဘူး
သတင်းစာဆရာ နေအောင် (သစ်နဖား)
ရွှေတိဂုံဂေါပက ဝတ်လုံတော်ရ ဦးဘစီ
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း (ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း)
သတ္တုတွင်းဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် သန်းတင်
စာရေးဆရာ ခင်ဇော် (ဇီးကုန်း)
↑ ၁.၀ ၁.၁ (မေ ၂၀၁၅) သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ, ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ အတွဲ-၂. နေပြည်တော်: လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန, ၅၇။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ တင်နိုင်တိုး (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၃). မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်. မဇ္ဈိမစာပေ, ၁၀၆။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဇီးကုန်းမြို့&oldid=369618" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဇွန် ၂၀၁၇၊ ၀၃:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။